Dugsiga sare ee Cumar Samatar Gaalkacyo oo caawa sidirqi ah uga guulaystay Xamdaan Bosaaso iyo semifinaalka oo habeen dambe bilaabanaya – Radio Daljir
Dugsiga sare ee Cumar Samatar Gaalkacyo oo caawa sidirqi ah uga guulaystay Xamdaan Bosaaso iyo semifinaalka oo habeen dambe bilaabanaya
Agoosto 2, 2013 2:02 g 0
Bosaso, 02 Aug – Waxaa caawa lasoo gabagabeeyey wareega sadexaad ee barnaamijka Tartan iyo Tacliin oo ay ku tarmayeen sideed dugsi oo ka mid ahaa 24-dugsi ee sanadkaan ka qaybaglayay barnaamijka.
Caawa ayaa waxaa tartan adag uu ku dhexmaray barnaamijka laba dugsi oo ku kala yaala magaalooyinka Bosaaso iyo Gaalkacyo ee dowladda Puntland, waxaana labada dugsi ee tartamay oo kala ahaa Xamdaan Bosaaso iyo Cumar Samatar Gaalkacyo ay soo bandhigeen tartan siweyn uu uga muuqday dadaal xoogan oo labada dugsi ay usoo galeen sidii midkasta uu dhankiisa ugu soo gudbi lahaa semifaanlka barnaamijka.
Tartanka ayaa gabagabadii waxaa si dirqi ah Xamdaan uga guulaystay dugsiga Cumar Samatar ee Gaalkacyo oo caawa usoo gudbay wareega semifinaalka.
Gudoomiyaha guddiga barnaamijka Tartan iyo Tacliin oo ku dhawaaqay natiijada ayaa sheegay tartanka inuu caawa kusoo dhamaaday Cumar Samatar oo sideed darajo ah iyo Xamdaan Bosaaso oo todobo darajo la yimid sidaasina ay guusha ugu raacday dusgiga Cumar Samatar.
Seminaalka ayaa waxaa usoo gudbay afar dugsi oo kala ah Cumar Samatar Gaalkacyo, Dangoroyo Secondry oo degmada Dangoroyo ka dhisan, Shaafici Bosaaso iyo Al-nuur Baran.
Habeen dambe ayaa waxaa taratami doona Shaafici Bosaaso iyo Al-Nuur Baran.
Hay?ada Bisha Cas ee UAE oo kordhisay Gargaarkii ay siin jirtay dunida oo ay Soomaaliya ugu horeyso